Musharixiinta Mucaaradka oo sheegay in Farmaajo uu inqilaab ku joogo Villa Soomaaliya - Awdinle Online
Musharixiinta Mucaaradka oo sheegay in Farmaajo uu inqilaab ku joogo Villa Soomaaliya
Xunnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha oo uu hoggaaminayo Madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, iyaga oo ka hadlay xaalada dalka iyo mudada xilheynta Madaxweyne Farmaajo oo dhamaatay.
Kulankooda kadib ayaa waxaa Warbaahinta la hadlay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur, iyaga oo Madaxweynaha mudada xilheyntiisa ay dhamaatay ee Farmaajo ay ku eedeeyeen in uu ku fashilmay waxyaabo ay kamid yihiin garsiinta doorasho dalka iyo dhameystirka Dastuurka.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in Maxamed Ca dullaahi farmajo uu ka dhamaaday waqtigii Dastuuriga ahaa ee xilka Madaxweynenimo, isla markaana wixii xilligaan ka dambeeya uu inqilaab ku joogo Villa Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in waxyaabo badan oo muhiim ahaa intii uu xilka haayay uu ku fashilmay, waxaana uu sicad ugu eedeeyay fashilkii ku yimid shirkii Dhuusamareeb ee looga tashanayay arrimaha doorashooyinka, waxaana uu Beesha Calamka uga digay inay dalka kusii haayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudada xilheyntiisa ay dhamaatay.
Dhinaca kale Madaxwyenihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in Madaxweynaha uusan qaadi karin wax tallaabo ah, isla markaana ay ka dhamaatay sharciyadii uu dalka ku maamulayay.
Sheekh Shariif oo sii hadlay ayaa uga digay Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya in siyaasad loo adeegsado, waxana uu gu baaqay in aysan qaadan amar qaldan oo ay faraan Madaxda mudada xilheyntooda uu ka dhamaaday, kaas oo dalka dhibato u horseedi kara.
Hadalkaan kasoo yeeray Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli xalay War-Saxaafadeed ay soo saaareen ay ku sheegay in laga bilaabo Maanta Farmaajo u aqoonsaneyn Madaxweyne.
Previous articleWasiir sheegay in dalka uu kajiro musuq maasuq weyn
Next articleDowladda Soomaaliya oo jawaab deg deg ah siisay Musharixiinta Mucaaradka